संयुक्त राज्य अमेरिका अन्ततः घर कपाल हटाउने उपकरणहरूको लागि एफडीए प्रमाणीकरण आवाश्यक छ। कपाल हटाउने उपकरणहरूमा विशेषज्ञता उत्पादकको रूपमा, तिनीहरूले के गर्नु पर्छ? - उद्योग समाचार-शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्तत: घरेलु कपाल हटाउने उपकरणहरूको लागि एफडीए प्रमाणीकरण आवाश्यक हुन्छ। कपाल हटाउने उपकरणहरूमा विशेषज्ञता निर्माताको रूपमा, तिनीहरूले के गर्नु पर्छ?
समय: 2020-11-04 हिट्स: 4
यस वर्षको अप्रिल र मेको रूपमा प्रारम्भमा, मैले सुनेको छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको अमेजनलाई एफडीए प्रमाणीकरण प्रदान गर्न सबै उत्पादनहरू आवश्यक पर्दछ जुन छालासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्छ। त्यस समयमा फ्रेट फारवर्डरले भन्सार क्लियरेन्सको मुद्दा सम्हाल्नको लागि सक्षम थियो, त्यसैले ठूलो संख्यामा गैर-एफडीए-प्रमाणित कपाल हटाउने उपकरणहरू अमेजनमा सूचीबद्ध थिए। यद्यपि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा महामारी COVID-१ out को महामारीको प्रकोप र अमेरिकी सरकारले बाध्य पारेको व्यापार युद्धसँगै। सेप्टेम्बर १, २०२० मा, अमेरिकी अमेजनले घरका कपाल हटाउने उपकरणहरूको लागि ठूलो संख्याको सूचिहरू जबरजस्ती हटायो। वर्तमानमा, उपलब्ध कपाल हटाउने उपकरणहरूको सूची फिलिप्स, ब्राउन, डेस र अन्य ब्राण्ड कपाल हटाउने उपकरणहरूको मात्र हो, र प्राय: सबै अन्य कपाल हटाउने उपकरणहरूको सूची बन्द छ। (हालसालै धेरै अमेजन विक्रेताहरूले केहि विशेष च्यानलहरूको माध्यमबाट सूची फिर्ता पाइसकेका छन्, तर यो लामो अवधिको समाधान होईन)
विक्रेता वा उत्पादकको रूपमा जुन उत्पादन कपाल हटाउने उपकरणहरूमा विशेषज्ञता राख्दै छ, उनीहरूले कसरी यो अचानक प्रहार गर्ने?
हामी सबैलाई थाहा छ, संयुक्त राज्य अमेरिका जहिले पनि प्रमुख ई-वाणिज्य उत्पादनहरूको लागि एक विशाल बजार भएको छ, र लगभग सबै उत्पादनहरू यस बजारमा भाग लिन चाहन्छन्। जहाँसम्म, राजनीतिक कारणले गर्दा, कपाल हटाउने उपकरणका विक्रेताहरूले अन्य विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ।
१,। तपाईं उत्तरी अमेरिकामा क्यानाडा वा मेक्सिकन बजारमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। सबै पछि, तिनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तै उत्तर अमेरिकामा सम्बन्धित छन्। यस समयमा, तपाइँ उत्पादन विकासमा अधिक ध्यान दिन सक्नुहुन्छ र अघिल्लो अनुभवको आधारमा उत्पादन अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। किनारालाई वेवास्ता गर्नुहोस्, तपाईंको ऊर्जा रिचार्ज गर्नुहोस्, र त्यसपछि आफैंमा सulate्कलन गर्नुहोस्। चरण पास नभएसम्म कुर्नुहोस्, र त्यसपछि हराएको फिर्ता लिनुहोस्।
२, अन्य बजारहरूमा सर्दै, कपाल हटाउने यन्त्रहरूको बजार संयुक्त राज्यमा मात्र होईन। साथै युरोप, जापान र मध्य पूर्वको ठूलो बजार सम्भावना छ। यद्यपि स्क्र्याचबाट सुरूवात गर्न केही गाह्रो हुनेछ, तर व्यापार गर्दा, कुनै असफल बिना सम्भव छ। यदि यसले तपाईंलाई हराउन सक्दैन भने, तपाईं शक्तिशाली बन्नुहुनेछ। म आशा गर्दछु तपाईसँग फेरि सुरु गर्ने हिम्मतको अभाव हुनेछैन।
कपाल हटाउने उपकरणहरूको निर्माताको रूपमा नोबल, हामी यस समयमा अझ असहाय छौं, तर हामीले हरेस खाएनौं। हामी यथास्थिति सुधार गर्न कडा मेहनत गरिरहेका छौं।
१, एफडीए प्रमाणीकरणको एप्लिकेसन र प्रसंस्करणको गति बढाउनुहोस्: मैले सोचेँ कि केवल ठूला कपाल हटाउने उपकरणहरू मात्र मेडिकल गेभमेनको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। तर अमेरिका चिनियाँ विक्रेताहरूलाई सहजै चाहँदैन, हामी स्वाभाविक रूपमा अरूलाई दोष दिन सक्दैनौं। हामीले के गर्नु छ हाम्रो ग्राहकहरुलाई सकेसम्म छिटो अमेरिकी मार्केटमा फर्कन सहयोग गर्नु हो। त्यसकारण, हाम्रो कम्पनीले सक्रिय रूपले FDA1K प्रमाणीकरणको लागि आवेदन गरिरहेको छ।
२, सक्रिय रूपमा अन्य सम्भावित बजारहरू अन्वेषण गर्नुहोस् र युरोप, जापान, मध्य पूर्व, र दक्षिण पूर्व एशियामा कपाल हटाउने यन्त्रहरूको पदोन्नती बढाउनुहोस्।
मलाई आशा छ हामी सँगै मिलेर यो कठिन समय सँगै बिताउन सक्नेछौं।
थप रूपमा, घरेलु बजारका ठूला थोक व्यापारीहरू कृपया मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाई के को लागी प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो अनुसरण गर्नुहोस्! हाम्रो नयाँ उत्पादनहरू जाँच गर्न तपाईंलाई लैजानुहोस्।
अघिल्लो: सौंदर्य सैलुनमा प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका पेशेवर कपाल हटाउने उपकरणहरूको परिचय